January 17, 2021 - Achawlaymyar
သင့် ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ ပုံစံကနေပြောနေတဲ့ သင့်တို့စုံတွဲအကြောင်း….
January 17, 2021 by Achawlaymyar
ထီပေါက်တော့မယ် ဆိုရင် မက်လေ့ရှိတဲ့နိမိတ်ပြအိမ်မက်များ
ထီပေါက်တော့မယ်ဆိုရင်မက်လေ့ရှိတဲ့နိမိတ်ပြအိမ်မက်တွေထီပေါက်စေတဲ့နိမိတ်ပြအိမ်မက်အိပ်မက်ကိုလူတိုင်းမြင်မက်ပါတယ်အိပ်တာနဲ့မက်တဲ့အိပ်မက်မျိုးကသွေးလေချောက်ချားပြီးမက်တဲ့အိပ်မက်ရှေးယခင်ကခံစားဖူးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးမက်တဲ့အိပ်မက်နတ်ဆိုးနတ်ဝါးတွေလှည့်စားလို့မက်တဲ့အိပ်မက်ဆိုးရယ်ဟူရယ်အိပ်မက်သုံးမျိုးရှိပါတယ် မိမိတို့အိပ်မက်၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုကြိုတင်၍သတိမထားသည့်အတွက်အကျိုးခံစားသင့်သောအရာများလွဲချော်သွားသည်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခပြောကြားခဲ့တဲ့ထီပေါက်စေတဲ့နိမိတ်ပြအိမ်မက်အချို့ကိုဗေဒင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနွားကိုစီး၍မြို့ရွာသို့လှည့်လည်ရသည်ဟုမြင်မက်သော်လည်းကောင်း လူစည်ကားသောအရပ်တွင်မိမိကနွားကိုစီး၍လူအပေါင်းတို့နှင့်လှည့်လည်ရသည်ဟုမြင်မက်သော်လည်းကောင်းနွားကိုစီး၍ထင်ရှားကျော်စောသည်ကိုမြင်မက်ခဲ့သော်အိပ်မက်သည်ထီပေါက်တတ်သောအိပ်မက်ဖြစ်သည်နေလကြယ်တို့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆွတ်၍လက်အတွင်းသို့ရောက်သည်ဟုမြင်မက်သည်ဖြစ်စေဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကဆွတ်၍ပေးသည်ဟုမြင်မက်သည်ဖြစ်စေနေလကြယ်နက္ခတ်တို့သည်ကြွေ၍ မိမိအိမ်သို့ကျရောက်သည်ဟုမြင်မက်သည့်အိပ်မက်တွေကလည်းထီပေါက်စေတဲ့အိမ်မက်တွေလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်မြွေပွေးမြွေဟောက်စသောတိရစ္ဆာန်များသည်တစ်ခုသောတောင်ပို့တွင်ဖြစ်စေကုန်မြေပေါ်တွင်ဖြစ်စေတည်ရှိနေ၍၎င်းမြွေများကိုကိုယ်တိုင်နှိမ်နင်း၍အတွင်းရှိပစ္စည်းများကိုသုံးဆောင်ခံစားရသည်ဟုမြင်မက်ခဲ့သော်ထိုအိပ်မက်သည်ထီပေါက်မည့်အိပ်မက်ဖြစ်သည် ဖော်ပြပါထီပေါက်စေတဲ့အိပ်မက်တွေကတော့လူတိုင်းမြင်မက်ခြင်းတော့မတူညီနိုင်ပါဘူးထီပေါက်ခြင်းဆိုတာကလည်းရှေ့ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လည်းထီဆုကြီးတွေဆုတ်ခူးနိုင်တာပါပရိသတ်ကြီးလည်းကံတရားဆိုတာဆန်းကြယ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကမိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာအကျိုးကြောင့်လက်ရှိဘဝမှာကံကောင်းထောက်မလို့ထီပေါက်စေတဲ့အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ရင်လည်းထီထိုးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာခရက်ဒစ်မင်င်္ခဗေဒင် Unicode, ထီပေါကျတော့မယျဆိုရငျမကျလရှေိ့တဲ့နိမိတျပွအိမျမကျတှထေီပေါကျစတေဲ့နိမိတျပွအိမျမကျအိပျမကျကိုလူတိုငျးမွငျမကျပါတယျအိပျတာနဲ့မကျတဲ့အိပျမကျမြိုးကသှေးလခြေောကျခြားပွီးမကျတဲ့အိပျမကျရှေးယခငျကခံစားဖူးတာကိုအကွောငျးပွုပွီးမကျတဲ့အိပျမကျနတျဆိုးနတျဝါးတှလှေညျ့စားလို့မကျတဲ့အိပျမကျဆိုးရယျဟူရယျအိပျမကျသုံးမြိုးရှိပါတယျ မိမိတို့အိပျမကျ၏ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးကိုကွိုတငျ၍သတိမထားသညျ့အတှကျအကြိုးခံစားသငျ့သောအရာမြားလှဲခြျောသှားသညျလညျးရှိပါတယျဒါကွောငျ့အဘဆရာကွီးမငျးသိင်ျခပွောကွားခဲ့တဲ့ထီပေါကျစတေဲ့နိမိတျပွအိမျမကျအခြို့ကိုဗဒေငျခဈြပရိသတျကွီးသိရှိအောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာနှားကိုစီး၍မွို့ရှာသို့လှညျ့လညျရသညျဟုမွငျမကျသျောလညျးကောငျး လူစညျကားသောအရပျတှငျမိမိကနှားကိုစီး၍လူအပေါငျးတို့နှငျ့လှညျ့လညျရသညျဟုမွငျမကျသျောလညျးကောငျးနှားကိုစီး၍ထငျရှားကြျောစောသညျကိုမွငျမကျခဲ့သျောအိပျမကျသညျထီပေါကျတတျသောအိပျမကျဖွဈသညျနလေကွယျတို့ကိုမိမိကိုယျတိုငျဆှတျ၍လကျအတှငျးသို့ရောကျသညျဟုမွငျမကျသညျဖွဈစဝေတျဖွူစငျကွယျနှငျ့ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဦးကဆှတျ၍ပေးသညျဟုမွငျမကျသညျဖွဈစနေလေကွယျနက်ခတျတို့သညျကွှေ၍ မိမိအိမျသို့ကရြောကျသညျဟုမွငျမကျသညျ့အိပျမကျတှကေလညျးထီပေါကျစတေဲ့အိမျမကျတှလေို့လညျးယူဆနိုငျပါတယျမွှပှေေးမွှဟေောကျစသောတိရစ်ဆာနျမြားသညျတဈခုသောတောငျပို့တှငျဖွဈစကေုနျမွပေျေါတှငျဖွဈစတေညျရှိနေ၍၎င်းငျးမွှမြေားကိုကိုယျတိုငျနှိမျနငျး၍အတှငျးရှိပစ်စညျးမြားကိုသုံးဆောငျခံစားရသညျဟုမွငျမကျခဲ့သျောထိုအိပျမကျသညျထီပေါကျမညျ့အိပျမကျဖွဈသညျ ဖျောပွပါထီပေါကျစတေဲ့အိပျမကျတှကေတော့လူတိုငျးမွငျမကျခွငျးတော့မတူညီနိုငျပါဘူးထီပေါကျခွငျးဆိုတာကလညျးရှကေ့ပွုခဲ့တဲ့ကုသိုလျကံအကွောငျးတရားတှကွေောငျ့လညျးထီဆုကွီးတှဆေုတျခူးနိုငျတာပါပရိသတျကွီးလညျးကံတရားဆိုတာဆနျးကွယျတဲ့အတှကျရှကေ့မိမိပွုခဲ့တဲ့ကုသိုလျကံစတေနာအကြိုးကွောငျ့လကျရှိဘဝမှာကံကောငျးထောကျမလို့ထီပေါကျစတေဲ့အိပျမကျတှမေကျခဲ့ရငျလညျးထီထိုးဖို့မမပေ့ါနဲ့ခငျဗြာခရကျဒဈမငျင်ျခဗဒေငျ
ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ကို အမြဲတမ်းအချစ်မလျော့စေမယ့် နည်းလမ်းများ….
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ် ။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ (၁) အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ မတွေးမိပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို သူအရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေလို့ပါပဲ ။ သင့်အကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါတွေးလွန်းပြီး သူ့ရဲ့စိတ်က သင့်အနားမှာပဲ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ပါပဲနော် .။ (၂) မထင်မှတ်ပဲတွေ့တယ် သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က အရမ်းလွမ်းတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ပဲ သူနဲ့ဆုံတာမျိုး၊ မချိန်းထားပဲနဲ့ တစ်နေရာတည်းကို အတူတူရောက်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ သင့်ဖက်ကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ … Read more
💕( ၇ ) ရက်သားသမီးများ အတွက် အချစ်ရေး ဗေဒင်💕
တနင်္ဂနွေ သားသမီး …. အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့အတွေးကတော့ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ်ဆိုတာ ပေးလို့ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ….လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။အခြေအနေပေးရင် တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ် ယူတတ်ပါတယ်။ သူများ အထင်ကြီးလေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်။အမျိုးသမီးများကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူအတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ ။တနင်္ဂနွေ သမီးများကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စန်းပွင့်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားများကတော့ အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ စတိုင်တွေပြတတ်တယ် ။ ကွယ်သွားတာနဲ့ မေ့ရော။ ကွယ်မေ့ တွေ့သေအောင်လွမ်းဆိုတာ တနင်္ဂနွေ သားတွေပဲ tongue emoticon … Read more
ကောင်လေးဘက်က သင့်ကိုအတည်တွဲနေမှန်း သိသာနေတဲ့ လက္ခဏာများ…
ကောင်လေးဘက်က သင့်ကိုအတည်တွဲနေမှန်း သိသာနေတဲ့ အချက်များ အချစ်ရေး တစ်ခုမှာ အကြောက်ရဆုံးကတော့ ကိုယ်က စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပုံအပ်ပြီးချစ်ရသလောက် ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲခံရတာပါပဲ။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများလည်း ကြုံရလေ့ရှိတဲ့…. ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သလို ခံစားရတာလည်း အရမ်းကိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲတာလား၊ အတည်တွဲတာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ သင့်ကိုအတည်တွဲနေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်ကံကောင်းပါတယ်။ (၁) သင့်အနားမှာနေရင် ရယ်မောပျော်ရွှင်နေမယ် သင့်ကိုအတည်တွဲတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင့်အနားမှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူပါ။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပျော်တဲ့ပုံဖမ်းနေတာမျိုးနဲ့တော့ အရမ်းကိုကွာပါတယ်။ သူ့ကိုသင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့၊ သင့်အနားသူ ရောက်လာတာနဲ့ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး ကြည်နူးနေတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ (၂) သူ့ရဲ့အပြုအမူမှာပေါ်လွင်နေတယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ စကားအပိုတွေ၊ တီတီတာတာတွေ သိပ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို အပြုအမူနဲ့ ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲ … Read more
FB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုးနပ်နေတာပါ…
FB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုးနပ်နေတာပါ…မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်… ဖတ်ကြည့်မှ……သိမှာမို့…..ဖတ်ကြည့်နော် ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ…… လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ် …။ အချိန်တော်တော်ကြာမှ အသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ် …။ အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ် …။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ် …။ အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ် …။ ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ် …။ “မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့်…အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ?” ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ်…“ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်… ငါကို ထားပစ်ရစ်ခဲ့တယ် ” အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုဘာမှမပြောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုက်တယ် …။ အဲဒီကျောင်းသူလေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…“ဆရာမ… သမီး ထင်တယ်… အဲဒီ အမျိုးသမီးအော်ပြောလိုက်မှာက …ငါတို့ကလေးကို … Read more
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း (စ-ဆုံး)#တွက်နည်းလေ့လာကြရအောင် အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။ ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ထို့နောက် အကြွင်း ၄ ဟောကိန်းအား ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ #ဟောကိန်း 🔢၁ကြွင်း ။ ကြွင်းဧက စွဲမက်ဖွယ် မွဲတတ်တယ် မယိမ်း။ အလွန်ဆိုးသော အတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ ဦးပေါင်းစည်းက စီးပွား ဖြစ်ထွန်းကိန်းမရှိ၊ ငွေကြေး စုဆောင်း၍ မရ။ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ တရိရိနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေတတ်သည်။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်ဝယ် ဟုသောကိန်းနှင့် အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးစားရှာဖွေလေခက်ခဲ ကျပ်တည်းသော … Read more
ညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ…
ညီမလေး ,,,အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် 1) စာတတ်တဲ့ယောက်ထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသာရွေးချယ်ပါ ။တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့သိပ်လိုအပ်တယ် ။ 2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမှာရှိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ 3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထားရိုးဖြောင့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးအတူပူအမျှလက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုငွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံနဲ့ မရဘူးဘယ်အရာမှာမဆို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာနဲ့ ဆက်ဆံရေးကသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အငြိုးကင်းစေတဲ့ လက်နက်ဖြစ်တယ် ။ 4) ဂုဏ်ရှိသူထက် ပြုံးရယ်နိုင်စေသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။လူ့ဘဝဆိုတာ ရေလှိုင်းလိုပဲ အနိမ့်အမြင့်ရှိတယ်ကိုယ့်အရိပ်အဖြစ် ခိုလှုံနေရသူဟာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလာပါစေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးပြီး ပြုံးရယ်နိုင်စေသူဖြစ်ဖို့အဓိက ကျတယ် ။ 5) ရုပ်ချောသူထက် အသိုင်းဝိုင်းသန့်ရှင်းသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။မတူညီတဲ့အသိုင်းဝိုင်းနှစ်ခု ပေါက်ဖွားလာသူတွေတစ်ဘဝအတူလက်တွဲပြီး တစ်မိုးအောက်ထဲနေဖို့ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပါလာသလို နှစ်ဖက်အသိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းအိမ်ထောင်စုတစ်ခုရဲ့ တစ်စိပ်တစ်ဒေသမှာပါဝင်ပါတ်သက်စေပါတယ် ။ကိုယ့်ဘဝကို တစ်သက်တာပေးအပ်ထားရမဲ့သူဟာက်ိုယ်နှုတ်အမူအယာ ယဉ်ကျေးပြီးမိမိသိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ ။ … Read more
မြန်မာ့ ဂဏန်းသင်္ချာမှာ ကုဋေ ပြီးရင် ဘာလာလဲ မသိသေးသူများအတွက်
ကုဋေ ပွီးရငျ ဘာလာလဲ။ ခု ၊ ဆယျ ၊ ရာ ၊ ထောငျ ၊ သောငျး ၊ သိနျး ၊ သနျး ၊ ကုဋေ ဆိုပွီး ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျတုနျးက ဆိုခဲ့ကွဖူးတယျ။ ကုဋေ ပွီးရငျ အစဉျလိုကျလာတဲ့ ဂဏနျးအချေါအဝျေါတှကေို မငျမငျက ဗဟုသုတအနနှေငျ့ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။ ငယျ၊စဉျ၊ကွီး၊လိုကျ ဆိုရသျောခု ၊ ဆယျ ၊ ရာ ၊ ထောငျ ၊ သောငျး ၊ သိနျး ၊ သနျး ၊ကုဋေ ၊ ကောဋိ ၊ ပကောဋိ ၊ ကောဋိပကောဋိ ၊ နဟုတံ ၊ နိန်နဟုတံ ၊ … Read more